မသိလိုက်ပဲကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း » မသိလိုက်ပဲကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း
မိမိသားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသား လောင်းသေဆုံးနေပေမယ့် ထိုဆုံးရှုံးမှုကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမသိလိုက်ဘဲ၊ တစ်သျှူးတွေရှင်းမပစ်သေးတာဖြစ်တယ်။ အသံတိတ်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုကိုခန္ဓာကိုယ်ကအသိအမှတ်မပြုတာ၊ မသိလိုက်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဟော်မုန်းတွေဆက်ထုတ်နေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလက္ခဏာတွေဆက်ခံစားရစေပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပါပဲ မသိလိုက်တဲ့ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းဟာ သွေးဆင်းခြင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွားဗိုက်နာခြင်း၊ သန္ဓေ္ဓသားတစ်သျူးများဆင်းခြင်း တို့ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့လက္ခဏာတွေမပြပါဘူး။ အချင်းရဲ့ ဟော်မုန်းများဆက်ထုတ်နေခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာများဆက်ရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာတော့ တချို့သောကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ် (ရင်သားတင်းခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်းစသည်)။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ ညိုညစ်ညစ် သို့ အနီရောင် ဆင်းခြင်းများသတိပြုမိနိုင်တယ်။ သန္ဓေ္ဓသားနှလုံးခုန်သံမကြားရပါက သန္ဓေသားသေဆုံးခြင်းအဖြစ် ဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အယ်လ်ထရာဆောင်းမှာ မဖွံ့ဖြိုးတော့တဲ့သန္ဓေသားအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရဲ့ ၁ ရာနှုန်းလောက် တနည်း အယောက် ၁၀၀ မှာ ၁ယောက် ထိုသို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
အများအားဖြင့်ခရိုမိုဆုန်းပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဟာ သန္ဓေ္ဓသားရဲ့ ရှေ့ဆက်ကြီးထွားခြင်းကိုတားဆီးလိုက်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မည်သည့်အချိန်မှာဖြစ်လဲပေါ်မူတည်တယ်။ စောစီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတွေကတော့ ကုသမှုရယ်မလိုဘဲ၊ အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ထိုတစ်သျူးတွေကိုသူ့ဖာသာသူစွန့်ထုတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆက်လက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကို ခန္ဓာကိုယ်ကသတိပြုမိဖို့ပဲစောင့်ရန်လိုတယ်။ ဆေးကူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Cytotec (misoprostol) ဟာ သားအိမ်ကိုညှစ်စေပြီး တစ်သျှူးတွေထွက်သွားစေတယ်။ တကယ်လို့ တစ်သျူးတွေကျန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က D&C လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ပတ် ၁၂ ပတ်ကျော်ပြီး သန္ဓေသားတစ်သျူးတွေစွန့်ထုတ်ဖို့ခက်တဲ့အချိန်မှ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုကတော့ ဆရာဝန်မှ သားအိမ်ခေါင်းကိုဖွင့်ကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ဖယ်ပစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေ္ဓသားတစ်သျှူးများ အနေကြာခြင်းကြောင့် ရောဂါပိုးကူးခြင်းကိုတားရန်လည်း ထိုနည်းကိုသုံးတယ်။
သတိမပြုမိလိုက်သောကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှသန္ဓေသားတစ်သျူးများသူ့အလိုလို သို့ ဆေးအကူအညီဖြင့်စွန့်ထုတ်ပါက ဓမ္မတာစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် D&C လုပ်ပြီးထုတ်ရန်လိုခဲ့ပါက ဓမ္မတာစက်ဝန်းသုံးကြိမ်လည်အောင်စောင့်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Hello Health Group မှ အခြားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများ၊ ကုသမှုများမပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သွေးအနည်းငယ်ဆင်းတာ စိုးရိမ်ရသလား
မရည်ရွယ်ထားသော ကိုယ်ဝန်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 27, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 27, 2018
Missed Miscarriage. https://www.fertilityauthority.com/fertility-issues/miscarriage/missed-miscarriage Accessed April 1, 2017
What IsaMissed Miscarriage? http://www.parents.com/pregnancy/complications/miscarriage/what-is-a-missed-miscarriage/ Accessed April 1, 2017
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို အဖြစ်များစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ။ ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြဿနာတွေနဲ့ Schizophrenia နဲ့ ဆက်စပ်နေသလား လေ့လာခြင်း